Ireo mpanjifa torrent tsara indrindra, misintoma haingana kokoa miaraka amin'izy ireo | Vaovao momba ny gadget
Teknolojia P2P, izay iankinany indrindra haka tahaka satria nivoatra i Bittorrent mba hanolotra fitaovana lehibe kokoa. Bittorrent dia protokolà fifanakalozana rakitra, fa tsy toy ny emule, ny solosaina tsirairay dia lasa loharanon'ny faritra rehetra ao amin'ilay rakitra izay alaina hatreto, amin'ity fomba ity, haingana kokoa ny fisintomana ireo rakitra.
Saingy, tsy toy ny emule, Mila mpanara-maso ny teknolojia Bittorrent, mba hahafantaran'ny mpanjifa Torrent ny toerana handefasana ny atiny, ilaina tanteraka hanombohana ny fisintomana karazana atiny. Raha tsy fantatrao hoe iza no mpanjifa Torrent hifidy, dia hasehonay anao izany ny mpanjifa torrent tsara indrindra amin'ireo izay misy eny an-tsena amin'izao fotoana izao.
1.1 Fitaovana fandefasana
6 Bit Torrent
8 Mpanjifa torrent ho an'ny Android
9 Mpanjifa torrent ho an'ny iPhone
Saika hatramin'ny nahatongavany teny an-tsena 13 taona lasa izay, lasa ny Transmission ny fitaovana tsara indrindra eny an-tsena raha ny amin'ny fisintomana rakitra amin'ny alàlan'ny Bitorrent. Tranmission dia fampiharana loharano malalaka sy misokatra tanteraka. Nandritra ny taona voalohandohany, tsy nisy afa-tsy ho an'ny tontolo iainana ekisitra Apple, saingy androany dia manome antsika kinova ho an'ny tontolo iainana Windows sy Linux.
ihany koa manolotra anay kinova ho an'ny NAS isan-karazany avy amin'ireo mpamokatra lehibe, toa ny Synology, Western Digital, D-Link ... izay ahafahantsika manamboatra ny fitaovana hiandraikitra ny fisintomana ny atiny nefa tsy mila mampiasa ny solosaintsika. Tranmission dia manolotra antsika ny safidy hamantatra ho azy ny fisintomana ireo rakitra .torrent ao amin'ny solosaintsika, ka rehefa misintona izy ireo, dia eken'ilay fampiharana izy ireo ary manomboka ny fisintomana, mamafa ny riaka .torrent mifanaraka aminy.
Mandritra ny tantarany niaritra fanafihana samihafa tamin'ny mpizara azy, manery ny orinasa hampiantrano ireo kinova misy ao amin'ny kitapom-bolan'ny GitHub. Raha mitady mpanjifa Torrent maivana sy maimaim-poana ianao, ny Tranmission no safidy tsara indrindra mety ho hitantsika eny amin'ny tsena amin'izao fotoana izao.
Fampidinana fisafidianana sy laharam-pahamehana amin'ny fisie arak'izay ilainay.
Sarintany an-tseranana mandeha ho azy
Fandrarana mandeha ho azy ho an'ireo mpanjifa mandefa angona tsy marina.
Fanohanana ho an'ny mpanaraka maro
Baraingo azo namboarina.
Mifanaraka amin'ny rohy Magnet.
Sintomy ny fandefasana
Inona ny uTorrent sy ny fampiasana azy
Avy amin'ny veterana toy ny Transmission dia lasa olom-baovao isika, saingy izany no antony tsy ahafahantsika manilika azy io avy hatrany. Maimaimpoana tanteraka ny WebTorrent, loharano misokatra ary tsy manome karazana dokam-barotra ho antsika, zavatra tokony hisaorana ary tena sarotra tratrarina amin'ity karazana mpanjifa ity.
Iray amin'ireo tombony lehibe atolotray antsika amin'ny mpanjifa Torrent hafa, hitantsika izany Izy io dia afaka mandefa horonantsary amin'ny alàlan'ny AirPlay, Chromecast ary DLNA, endri-javatra izay vitsy ny mpanjifa manolotra. Izy io dia mifanaraka amin'ny rohy Magnet sy .torrent ary ny asany dia tsotra toy ny fitarihana ireo rakitra .torrent ao anaty rindrambaiko hanombohana ny fisintomana.
Araka ny tondroin'ny anarany dia mamela antsika koa ny WebTorrent mitantana fampidinana amin'ny alàlan'ny tranonkala iray, safidy izay tsy atolotra anao hatrizay raha manidy ny browser izahay dia mijanona ny fampidinana fa mety tsara ho an'ireo mpampiasa mandany ny andro amin'ny fisokafan'ny mpitety tranonkala.
WebTorrent dia misy ho an'ny Windows, Mac, ary Linux. Sintomy WebTorrent
Raha mila fiainana manokana ianao rehefa misintona ireo karazana fisie ireo amin'ny alàlan'ny Internet ary manana mpilalao tafiditra ao koa, ny mpanjifa tsara indrindra azontsika jerena dia Tribler, mpanjifa izay mampiasa ny tambajotrany manokana mampiasa mpizara proxy telo eo anelanelan'ny mpandefa sy ny mpandray ireo rakitra. Saingy raha tsy ampy ny safidim-piainana atolotray antsika, dia ao anatin'ireo safidiny fanamboarana no ahafahantsika mahita safidy hitondra ny fanatisma indrindra momba ny fiainana manokana.
Tribler, toy ny Transmission ary Maimaimpoana tanteraka ny WebTorrent, dia loharano misokatra ary misy motera fikarohana torrent izay mampiseho amintsika ireo rakitra alaina amin'ny alàlan'ny rindranasan'ny mpampiasa. Triblers dia misy amin'ny Windows, Mac ary Linux. Ampidino ny Tribler.
Tonga teny amin'ny tsena i Vuze tamin'ny taona 2003, ary nandritra ny taona maro dia nanatsara izany tsy ny sehatry ny mpampiasa ihany, fa koa ny isan'ny fiasa sy safidy omeny antsika. Vuze mampiditra a motera fikarohana torrent, toy ny Triblers amin'ny alàlan'ny rakitra rehetra zaraina amin'ny alàlan'ny fampiharana anao.
Vuze dia tsy natao hampidina rakitra misy zon'ny mpamorona, fa koa mamela antsika hizara rakitra ara-dalàna amin'ny olon-kafa amin'ny alàlan'ny chat izay manolotra antsika ihany koa ilay rindranasa, fomba iray tsara hizarana rakitra be nefa tsy mila manararaotra mijery ireo tranonkala mamela anay handefa rakitra be dia be.
Vuze dia misy amin'ny kinova roa, iray miaraka amin'ny doka izay tsy mamela antsika hilalao ny atiny raha misintona na manome fiarovana antsika amin'ny antivirus ary ny iray hafa miaraka amin'ny doka, izay mitentina $ 9,99, izay manome antsika ireto safidy roa ireto ankoatry ny famelana anay hanoratra ireo rakitra misintona amin'ny DVD izahay.
Vuze dia misy amin'ny Windows, Linux, ary Mac. Ampidino ny Vuze.
Iray amin'ireo mpanjifa malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao Bitorrent dia uTorrent, iray amin'ireo mpanjifa manome antsika tombony tsara indrindra amin'ny resaka fanjifana harena. Ny MB dia tsy mitana afa-tsy 2 MB, amin'izay afaka mahazo hevitra momba ireo loharano vitsivitsy azony apetraka ao amin'ny rafitray isika, amin'izay afaka miasa any ambadika izy nefa tsy hitantsika akory amin'ny fotoana rehetra.
Ataovy maivana anefa izany tsy midika hoe tsy manolotra antsika safidy fanaingoana, satria uTorrent dia mamela antsika hitantana misintona tsirairay na miaraka ary mamela antsika hitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny finday avo lenta.
Raha te hahazo tombony betsaka amin'ny Torrent isika, toy ny filalaovana horonantsary alaina na filalaovana ny atiny mandritra ny fisintomana azy ireo, voaaro amin'ny antivirus, mamindra ireo rakitra alaina amin'ireo fitaovana kendrena na tsy mila misintona codecs, manana safidy hividy ny kinova Pro izahay, izay vidiny 22 euro.
Torrent dia misy amin'ny Windows, Linux, Mac, ary Android. Sintomy i Torrent.
Fa raha inona no tena tianay ireo safidy fanamboarana hahafahanao mifehy amin'ny fotoana rehetra ny fisintomana ny rakitra, ny fantsom-pifandraisana ampiasain'ny rindranasa, izay anaovana rakitra tsy maharitra sy rakitra alaina, ny habetsaky ny loharanon-karena natokana ho an'ny fampiharana ... Bittorrent no mpanjifa ilainao.
Bitorrent dia iray amin'ireo mpanjifa torrent feno indrindra eny an-tsena, ary misy amina kinova telo, ny iray maimaim-poana tanteraka ary miasa nefa miaraka amin'ny doka, ny iray hafa tsy misy doka $ 4.95 isan-taona sy ny kinova Pro. Ny kinova Pro, izay mitentina $ 19.95 isan-taona, ankoatry ny fanesorana doka avy amin'ny The Ny rindrambaiko dia manolotra antsika mpilalao video natsangana, fiarovana ny antivirus, serivisy ho an'ny mpanjifa, ary koa mamela antsika hanova ny fisintomana hahafahantsika milalao amin'ny fitaovana rehetra.
Bitorrent dia misy ho an'ny Windows, Mac ary Android. Sintomy ny Bitorrent
Ny ankamaroan'ny mpanjifa torrent ahafahantsika manamboatra ireo safidy ireo ihany, farafaharatsiny ny tena fototra. Raha tsy te hampiasa mpanjifa torrent be dia be izahay, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mampiasa maimaimpoana ary avy eo mampiasa ny mpilalao VLC, izay mitovy amin'ireo mpanjifa torrent izay manome anay mpilalao tafiditra.
Mikasika ny fiarovana ny viriosy, raha matetika no mampiasa tranokala mitovy misintona ny riaka, ary tsy mbola nanana olana hatreto amin'ny resaka areti-mifindra ianao, dia tsy mila programa misy an'io karazana io ianao. Ho fanampin'izay, ny vondrom-piarahamonina dia efa miandraikitra ny famongorana na ny fanaovana tatitra ny fisian'ireo rindran-dranomasina misy virus na izay tsy tena asehon'ny anarana
Mpanjifa torrent ho an'ny Android
Na dia marina aza fa tsy ny sarimihetsika, mozika ary rindranasa ihany no zaraina amin'ny tambajotra Bittorrent, na dia maneho ny 99% amin'ny fampiasan'izy ireo aza, ny Bittorrent dia azo ampiasaina ihany koa mizara rakitra kely kokoa izay tsy azontsika zaraina amin'ny alàlan'ny mailaka. Ho an'ireo tanjona ireo, misy dikany ny fampiharana torrent.
Eny an-tsena ihany no hitantsika izao fampiharana Android roa ahafahantsika misintona rakitra fisintomana avy amin'ny fitaovantsika finday tantanan'ny Android. Miresaka momba ny uTorrent sy Bittorrent izahay, roa amin'ireo mpanjifa birao malaza eran-tany ary be mpampiasa indrindra amin'ny fampidinana ireo rakitra falehan-driaka. Samy azo alaina maimaim-poana tanteraka izy roa amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Developer: Bit Torrent, Inc.
Mpanjifa torrent ho an'ny iPhone
Ny mpanjifa Bittorrent amin'ny fitaovana finday dia misy dikany ihany raha ampiasaintsika hizara rakitra izay tsy misy toerana ao amin'ny serivisy mailaka mahazatra anay, serivisy izay tsy mamela antsika mihoatra ny 25 MB amin'ny firaketana. Apple dia manana vahaolana tonga lafatra amin'ity karazana vahaolana ity, satria izy no tompon'andraikitra amin'ny fampidirana ireo rakitra amin'ny iCloud ary avy eo mandefa hafatra any amin'ilay mandray miaraka amina rohy hampidinana azy.
Fa raha te hampiasa mpanjifan'ny tamba-jotra Bittorrent isika, ao amin'ny App Store tsy afaka mahita rindrambaiko ofisialy izahay ahafahantsika mitantana azy ireo, satria manitsakitsaka ny làlan'ny App Store izy ireo amin'ny famelana anao hisintona atiny arovan'ny zon'ny mpamorona. Fa raha jailbroken ny fitaovantsika dia afaka mampiasa ny rindranasa iTransmission isika, fampiharana iray azo alaina amin'ny magazay fampiharana Cydia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny mpanjifa torrent tsara indrindra
Nanamafy i Apple fa hamely ny tsena ny Mac Pro amin'ny taona 2019